डिभोर्स भईसकेपछि पनि पूर्वपत्नी ढकालले अत्ति गरेपछि मनोज गजुरेल अदालत जादैँ, मध्यरातमा गरे यस्तो घोषणा ! (विस्तृतमा हेर्नुहोस्) – ramechhapkhabar.com
डिभोर्स भईसकेपछि पनि पूर्वपत्नी ढकालले अत्ति गरेपछि मनोज गजुरेल अदालत जादैँ, मध्यरातमा गरे यस्तो घोषणा ! (विस्तृतमा हेर्नुहोस्)
चर्चित हास्यकलाकार मनोज गजुरेलले आफ्नो तीनवर्ष अघि नेपालको कानुनअनुसार डिभोर्स गरेर सम्बन्ध सकिएको कुरा पनि बारम्बार उठाइएको भन्दै अब कानुनीरुपमा न्यायका लागि अगाडि बढ्न खुट्टा उचालेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै उनले विगतमा भएका कुरा, युट्युबर तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यममा आएका टिकाटिप्पणीले आफूलाई निकै दुःखी तुल्याएको बताएका छन् ।
“झन्डै तीन वर्षअघि नेपालको कानुनअनुसार डिभोर्स गरेर सम्बन्ध सकिएको कुरा यहाँहरुलाई सर्वविदितै छ । तर कानुनीरुपमा नै आ आफ्नो बाटो लागिसकेपछि पनि अर्को पक्षबाट विभिन्न माध्यमबाट बारम्बार गाली बेइज्जती गर्ने क्रम रोकिएन । एउटा सार्वजनिक र जिम्मेबार नागरिकको नाताले अहिलेसम्म मौन रहेँ । दुई सन्तानको जिम्मा लिएर बसेको अभिभावकको नाताले चुपचाप सहेँ । तर यो गाली बेइज्जती, अनावश्यक तनावको शृङ्खलाले बढ्दै गएर मेरो परिवारसम्म असर पर्न थाल्यो । त्यसैले बाध्य भएर केही प्रष्टीकरण गर्न तयार भएको छ।”
यस्तो छ उनको फेसबुक स्टाटस::
१। झन्डै तीन बर्षअघि नेपालको कानुन अनुसार डिभोर्स गरेर सम्बन्ध सकिएको कुरा यहाँहरुलाई विदितै छ । तर, कानुनी रुपमै आ(आफ्ना बाटो लागि सकेपछी पनि अर्को पक्षबाट विभिन्न माध्यामबाट बारम्बार गाली बेईज्जती गर्ने क्रम रोकिएन । एउटा सार्वजानिक र जिम्मेवार नागरिकको नाताले अहिलेसम्म मौन रहेँ । दुई सन्तानको जिम्मा लिएर बसेको अभिवाभकको नाताले चुपचाप सहेँ । तर, यो गाली बेईज्जती, अनावस्यक तनावको श्रृँखलाले बढ्दै गएर मेरो परिवारसम्म असर पर्न थाल्यो । त्यसैले बाध्य भएर केही प्रष्टिकरण गर्न भएको छु ।
३। अंश सहित आफुसँग बस्न लगेकी छोरी डिभोर्सको ८ महिनामै आमासँग बस्न नरुचाएर घर फिर्ता आएकी छिन् जुन मैले पहिलो पटक सार्वजानिक गर्दैछु । अर्को पक्षले भनेझैं हामी बिच कुनै लेनदेन बाँकी छैन छोरीको नाममा लगेको अंश बाहेक । तर, सामाजिक सन्जालमा अर्को पक्षबाट बारम्बार ममाथी हुने अनावस्यक टीका टिप्पणी, युटुबमा उनिहरुका फोटोको दुरुपयोगले मेरा सन्तान पढाइ र जीवन आघात परिरहेको छ ।
४। युट्युबर तथा अनलाईनका साथीहरु, तपाईंहरुलाई पनि यही स्टाटसबाट अनुरोध गर्दछु( मेरो नाम, फोटो र प्रसङ्ग जोडेर कसैसँग ुअन्तर्वार्ताु लिँदै गर्दा आफ्ना सन्तानलाई सम्झनोस्, पत्रकारिताको नियमलाई याद गर्नोस् । अनि, देशको कानुनलाई मनन गर्नोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु जसले भोलि कानुनी अप्ठेरो नपरोस् ।